Alatsinainy 03 Aogos. 2020 – FJKM
Ny loza mpahazo ny olona
Araka ny voalaza eto amin’ny and 9 dia misy telo karazana ny loza mpahazo ny olona :
Toejavatra mafy sy sarotra maharary , mampitomany , mampamoifo mpahazo ny olona ny fahoriana ary mety hihatra amana aina mihitsy aza izany . Ny zava-nisy nahatonga ny fanehoana ny fahoriana eto dia ny nataon’ny mpitondra tsy mivavaka mankahala sy manaratsy mpivavaka ka manenjika sy mihevitra ny hamongotra azy ireny ary izay ilay hoe : mampitondra fahoriana .
2-Ny fahantrana :
Vokatry ny fifandraisan’ny olona samy olona eo amin’ny fiaraha-monina izany , satria miovaova izao fiainana izao . Voalaza hoe : nahantra ny olona teto nefa ny tena marina dia nampahantraina tahaka izay nisy tamin’ny kristiana Hebreo fahiny (Heb 10.34) . Raha ny marina dia fahantrana hita ety ivelany ihany izany , fa manankarena ao anaty kosa izy noho ny fifandraisany tamin’ny Tompo . Ity ilay atao hoe : “joko mihasolanga” . Ampitahao amin’ny zava-nisy tany Laodikia (Apo 3.17) izay antsoina kosa hoe : “solanga mihajoko”
3-Ny fitenenan-dratsy ataon’ny milaza ny tenany ho Jiosy
Ny fanaratsiana indrindra no ambara amin’izany izay mahakasika ny sehatry ny fivavahana . Mivondrona izy ireo , tsy voatery ho any ivelany fa ao anaty fiangonana mihitsy , olona mifanerasera mihitsy , nefa dia tena mahasahy manaratsy .Tsy ireo ihany akory ny zava-mahazo ny olona , fa entina hilazana ny santionany amin’izay zava-manjo ireo . Tsy mamela ny olona ho irery ny Tompo , satria Izy no efa niharan’ireny ka manana vahaolana amin’izany (Jereo Mat 11.28) .
Inona no vahaolana omen’ny Tompo ireo tra- pahoriana ?
Zoma 18 Septambra 2020.
Alakamisy 17 Septamb 2020.
Alarobia 16 Septambra 2020.
Talata 15 Septambra 2020.
Alatsinainy 14 Septambra 20.